Nu မူကွဲ SARS-CoV-2 - Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
Harley လမ်းကုသမှုပုဂ္ဂလိက Covid19 စမ်းသပ်ခြင်း Liposuction Coolsculpting
ဆံပင် & ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း
Harley St ဆေးခန်း FUE ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း
လန်ဒန်လေဆာ Liposuction Harley လမ်းဆေးခန်း
Transosseous သွား implants
လန်ဒန် Harley လမ်း Coolsculpting
Nu မူကွဲ SARS-CoV-2
အခုကတော့ Variant ပါ – SARS-CoV2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ Delta မူကွဲများအလျင်အမြန်ပြန့်ပွားမှုဖြစ်နိုင်ချေကိုရှင်းပြချက်တွင်, လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရဤမျိုးကွဲသည်ကူးစက်နိုင်ခြေပိုမြင့်ပြီးယခင်ကူးစက်မှုများ (သို့) ကာကွယ်ဆေးများမှတစ်ဆင့်ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုကိုရှောင်ရှားသည်။.
Nature ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်, အိန္ဒိယနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှသုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် Delta မူကွဲကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (သို့မဟုတ် B.1.617.2 မျိုးရိုး) မူလဗိုင်းရပ်စ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် AstraZeneca သို့မဟုတ် Pfizer ကာကွယ်ဆေးများမှရရှိသောခုခံစွမ်းအားမှလွတ်မြောက်ရန်ရှစ်ဆပိုများသည်. ဒါ့အပြင်, Delta ပုံစံသည် Covid-19 မှပြန်လည်သက်သာလာသောသူများအားပြန်လည်ကူးစက်ရန်ခြောက်ဆပိုများသည်.
ဒီအပတ်အတွင်းမှာ UCL ရဲ့အဆိုအရ, က မူကွဲ ထက်ပိုမိုများပြားသည် 80% ယူအက်စ်တွင်ဖြစ်ပွားမှုအသစ်များ. ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်မျိုးစိတ်အသစ်များသည်ပိုမိုကူးစက်လွယ်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုကူးစက်လွယ်သည်ဟုဆိုသည်။.
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းနည်းသောရပ်ရွာများတွင်, အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်စောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်သောအကန့်အသတ်ရှိသည်, Nu variant သည် ပို၍ ပင်ထိခိုက်စေနိုင်သည်. COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလက်လှမ်းမမီသောဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင်ဤအရာအားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်သည်. ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့နောင်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာခံစားရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်.
အဓိက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကာကွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်
1. Nu သည်အခြားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများထက်ကူးစက်လွယ်သည်.
3. Nu သည်“ hyperlocal out ဖြစ်ပွားမှုများ” သို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။’
4. Nu Variant အကြောင်းလေ့လာရန်နောက်ထပ်ရှိသေးသည်.
5. ကာကွယ်ဆေးသည် Nu Variant အားအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်သည်.
Orion မူကွဲ Covid 19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
Theta မူကွဲ Covid 19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
ETA မူကွဲ Covid 19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ၏ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် Harley စိန့်ဆေးခန်း ထိုကဲ့သို့သောအလှကုန်ခွဲစိတ်ကုသအဖြစ်ကုသမှု၏အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်း, IVF ဆေးခန်း, လေဆာမျက်လုံးကုသခြင်း, သွားဆေးခန်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါဆေးခန်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောဆေးခန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ကိုရှာဖွေ။
Harley စိန့်ဆရာဝန်များဆေးခန်း Harley လမ်းပေါ်မှာ.
PCR Test London အခမဲ့
သီးသန့် Covid-19 PCR စမ်းသပ်မှုများသည်နိုင်ငံခြားသို့ပျံသန်းရန်အဆင်ပြေသည်
Covid Booster ရိုက်ချက်များ
Epsilon မူကွဲ Covid coronavirus ကာကွယ်ဆေး
ပုဂ္ဂလိကလန်ဒန်ကလပ်သည်နိုင်ငံခြားတွင် Covid ကာကွယ်ဆေးများကိုပေးသည်
© 2021 Harley-Street-Clinic.com| Sitemap | ချေးငွေ | ဆက်သွယ်ရန် | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | Harley လမ်းဆေးခန်း, Harley လမ်း, လန်ဒန် SW1 1AA